Home » News na ụgbọ elu » Ndị ụgbọ elu ga-enwerịrị mmekọrịta bara uru iji kwado nkwado gburugburu ebe obibi
Ndị ahịa na-enwewanye mmetụta na ngwaahịa na ọrụ dị mma na gburugburu ebe obibi.
Mbelata ojiji nke plastik na ịnakwere ihe ndị na-eme ka gburugburu ebe obibi ezughị iji dozie okwu nkwado
Airlinesgbọ elu ga-emerịrị omume niile iji hụ na ndị njem ahọrọghị njem ọzọ
Ndị njem ụgbọ elu na-awụli elu maka nhọrọ ndị nwere gburugburu ebe obibi
Site na ịmekọrịta mmekọrịta bara uru nke na-edozi ihe kpatara ya, ụgbọ elu ga-enye onwe ha ohere nke ịbụ ndị ndu gburugburu ebe obibi n'ime ụlọ ọrụ ha. Mbelata ojiji nke plastik na ịnabata ihe ndị na-emetọ gburugburu ebe obibi ezughị iji dozie okwu nkwado, yana a ga-emerịrị ihe ndị ọzọ.
Ndị ahịa na-enwewanye mmetụta na otu ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ enyi na gburugburu ebe obibi, na Q1 2021 Consumer Survey nke ụlọ ọrụ na-ekpughe na 76% nke ndị na-aza ụwa niile bụ 'mgbe niile', 'mgbe mgbe', ma ọ bụ 'mgbe ụfọdụ' na-emetụta ihe a, yana dị ka otu ụkpụrụ omume / mmekọrịta mmadụ na ibe ya si arụ ọrụ ma ọ bụ ọrụ dị.
Iji nweta ihe ọmụma na nkà iji dozie nsogbu ndị ka ukwuu, ụgbọ elu nwere ike inweta otu ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na nkwado ma ọ bụ mekọrịta mmekọrịta mmekọrịta. N'otu ụzọ ahụ Delta Air Lines si nweta mmanụ mmanụ na 2012 iji nweta nchekwa na mmanụ ọkụ ya, ndị ụgbọ elu kwesịrị ịchọ ime otu ihe ahụ na ụlọ ọrụ biofuel. EasyJet soro Wright Electric jikọọ aka na 2017 iji mepụta ụgbọ elu eletriki nwere ike iji ụgbọ elu dị mkpụmkpụ. Wright Electric nwere ọkachamara iji mee ka ọ mee, na EasyJet nwere mmasị dị omimi n'echiche ahụ ga-abụ eziokwu.
Iji lụso ọgụ na-agba ụgbọ elu agha, ndị ụgbọ elu ga-eme ihe niile enwere ike iji hụ na ndị njem ahọrọghị njem ọzọ, ọkachasị n'okporo ụzọ dị mkpirikpi. Dika njem ugbo elu eletrik na-ewu ewu - na netwọkụ zuru oke na Europe na Eshia - ụgbọ elu na-etinye ndị njem na-awụli elu karịa nhọrọ ndị nwere gburugburu ebe obibi. Ọ bụrụ n'ọganihu iji mee ka ụlọ ọrụ ụgbọ elu na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nwayọ nwayọ, mgbe ahụ mmetụta ndị ahụ nwere ike ịdị anya.
Ọtụtụ ụgbọ elu amalitela atụmatụ iwepụ carbon, belata ojiji nke plastic, wee rụọ ọrụ ka ha nwekwuo mmekọrịta gburugburu ebe obibi, mana obere mmeri ndị a ezughi iji dozie nsogbu sara mbara. Ntinye ego n'ime mmanụ ụgbọ elu na-adigide (SAF) na ụgbọ elu nke ọzọ nwere ike ịrụ ọrụ bụ usoro na-esote, yana mmekọrịta mmekọrịta bara uru ga-abụ isi ihe iji mee ka echiche ndị a bụrụ eziokwu.
IAG na nso nso a nyere 10% SAF ojiji site na 2030. Site na ọnụ ọgụgụ nke otu ụgbọ elu dị ka IAG, itinye ego na ụlọ ọrụ raara onwe ya nye ga-abụ ihe amamihe. Ọ ga - enye nchekwa n’elu ọkọnọ ma nwee ike ịhapụ ka emefere nkwa gị. Ntinye ego dị ka nke a nwere ike ịbụ ụzọ na-aga n'ihu na -emepụta ọnọdụ mmeri maka ọdụ ụgbọ elu ọ bụla na-eleba anya na nchegbu ndị njem na-enwe banyere nkwado nke njem ụgbọ elu na arụmọrụ n'ọdịnihu.
Ọrịa COVID-19 agbasaala ụlọ ọrụ ndị ọrụ ụgbọelu na ndị ụlọ ọrụ metụtara ụlọ ọrụ ka ha laa azụ ma lekwasị anya na atụmatụ iji mee ka ọganihu a na-eme ugbu a mee ka ikuku ụgbọ elu. Site na ndị njem nwere ike ịgbanwe gaa na nke ọzọ, nhọrọ ụgbọ njem na-acha akwụkwọ ndụ n'okporo ụzọ dị mkpụmkpụ, ụgbọ elu ga-achọ mmekọrịta mmekọrịta iji nwee ọganihu n'ihu na oghere a ma chebe ọdịnihu ha.